भाग्यशाली राशिहरु। जसको भाग्योदय यसरी हुदैछ
२०७७ सालमा ५ राशीहरुको भाग्योदयको योग छ । ती ५ राशिका उच्च स्थानमा बृहस्पति बसेका छन् । जसबाट उनीहरुको जीवनका धेरै लाभदाय प्राप्त हुनेछ । आर्थिक उन्नती, पारिवारिक योग, प्रेम योग, व्यापारिक, शैक्षिक र नोकरीमा उच्च पदस्थान हासिल गर्ने ग्रहगोचर रहेको छ ।
१. बृष राशी भाग्यस्थानमा बृहस्पति बसेको हुदा बृष राशीको २०७७ सालभरि फलिफाप हुनेछ । नयाँ काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । सन्तानबाट सुख, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति हुने समय छ । बैदेशिक यात्राको अवसर र पुराना कार्यहरुमा सफलता मिल्नेछ । शत्रु पराजय, धामिक तीर्थयात्रा हुनेछन् । ऐस आराम जग्गाजमीन, सवारी साधन प्राप्त हुनेछन् ।
२. कर्कट राशी २०७७ सालको भाग्यशाली राशी कर्कट राशी हुने व्यक्तिहरुका लागि शुभ छ । कुण्डलीको सप्तमस्थान (दाम्पत्य तथा व्यापार व्यवसाय)मा बृहस्पती बसेका छन् । दाम्पत्य जीवनमा ठूलो सुख प्राप्ति मिल्नेछ । प्रेममा सफलता र दिगो हुने भएको प्रेम गर्ने जोडीहरुको लागि अति उत्तम वर्ष रहेको छ । व्यापार व्यवसाय अत्यन्त लाभदायक योग परेको छ । यात्राको अवसर र मनोबल उच्च रहनेछ । घरजग्गाको खरीद निर्माण लागि अति उत्तम समय रहेको छ र सफलता समेत मिल्नेछ । यात्राको शुभ योग पनि रहेको छ ।
३. कन्या राशी यो राशी हुने व्यक्तिहरुका लागि ०७७ साल अति भाग्यशाली बनेर आएको छ । राशीको पञ्चम स्थानमा बृहस्पति गएर बसेका छन् । जसबाट सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान बृद्धि हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सरकारी नोकरीमा पदोन्नती हुनेछ । रोकिएका धनहरु प्राप्त हुने योग परेको छ । सन्तान नभएकाहरुका लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ । भाग्यमा बृद्धि हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रबाट विशेष प्रगति हासिल हुनेछ ।
४. धनु राशी यो राशी हुनेका लागि साँढेसाती शनि भएतापनि बृहस्पति द्धितिय स्थान (वाणी) मा गएर बसेका छन् । धन र शैक्षिको स्थानमा वृहस्पति बसेका हुनाले धनलाभ, शिक्षा प्राप्ति हुनेछ । धनवान शक्तिमान बनाउने योग परेको छ । शत्रुहरु परास्त हुनेछन् । सबैतिरबाट सहयोग र जताततै सफलता मिल्नेछ । सवारी साधनबाट बढी लाभ मिल्नेछ । आय आर्जनका क्षेत्रहरुबाट धन प्राप्त हुनेछ । रोकिएका कामहरु सहजै बन्नेछन् । फलामजन्य, लेखन तथा होटलव्यवसायबाट बढी लाभ मिल्नेछ । तर्कविर्तकमा तपाईको उच्च स्थान हासिल हुनेछ ।
५. मीन राशी यो वर्षको अति भाग्यशाली राशि मीन राशी हो । यो राशीको लाभस्थानमा गएर बृहस्पति बसेका छन् । जसबाट यो वर्ष जताततैबाट लाभै लाभ मिल्नेछ । सानो कामबाट पनि ठूलो लाभ हुनेछ । सन्तान सुख, मान सम्मान र इज्जत उच्च हुनेछ । रोकिएको धन प्राप्त हुनेछ । सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ र बढ्नेछ । लगानीको लागि अति उत्तम वर्ष रहेको छ । नयाँ व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रो रहेको छ । नयाँ जागीर पाउने र पद प्रतिष्ठा बढ्ने योग समेत रहेको छ ।